Kudya kweArtichoke - Maitiro ekuita kudya nedanho! | Kudya kweNutri
Sergio Gallego | | Utano
Chikafu cheatichokoke ndeimwe yeakanyanya mukurumbira uye mukurumbira Munyika yedu. Yakati chirongwa chekudzikisa uremu uye sezita zvarinoreva, chakavakirwa pa zvinhu zvakawanda zveartichoke kuita kuti munhu ari kutaurwa arasikirwe akateedzana emakirogiramu munguva pfupi pfupi inogoneka.
Chikafu chakakurumbira cheatichokie chine vazhinji vanoshora uye vazhinji vanotsigira kazhinji zvinowanzoitika nemhando iyi yekudya minana inodaidzwa. Tevere ini ndinokuudza iwe mune zvakawanda zvakadzama chikafu ichi chine chii, zvimwe zve zvayakanakira uye njodzi dzayo kuitira kuti neiyi nzira iwe uri kunyatsojeka, kana zviripo kana kuti kwete kuramba uchitaura nzira yekutsvedza kubvisa iyo isinganzwisisike yakawedzera kirogiramu kubva kune yako chimiro.
1 Kupfupisa zvivakwa zveartichoke
2 Chii chinonzi artichoke chikafu?
3 Chii chaunogona kudya mune ine hutano artichoke chikafu?
Kupfupisa zvivakwa zveartichoke
Artichoke chikafu chine nhevedzano ye zvinhu zvakakwana kuderedza uremu uye kuderedza uremu. Naizvozvo, zvakakosha kusanganisa ichi chigadzirwa nemamwe marudzi echikafu. sezvakangoita zvinovaka muviri uye nekudaro uwane mhando yechikafu hutano uye hwakadzikama yakakwana kumuviri. Iyo huru slimming zvivakwa ye artichoke ndeiyi inotevera:
Iyo yakanaka fiber sosi saka zvichakubatsira ndinzwe kuguta nekukurumidza uye nekudaro dzivisa kudya akawanda macalorie Pamusoro peizvi, artichoke yakakwana kutonga ura hwakanaka hwemukati uye dzivisa matambudziko nekugaya kwechikafu.
Ndicho yakanakisa diuretic saka zvinobatsira muviri kubvisa huwandu hwehupfu uye tsvina uye inodzivirira kuchengetwa kwemvura.
Icho chikafu ne zvakawanda zvinovaka muviri uye yakaderera kwazvo koriori saka yakanaka kuonda nenzira ine hutano.
Muchidimbu, artichoke chikafu chakakwana kusanganisa mukudya kwezuva nezuva uye uwane kudya imwe ine hutano uye isina mafuta nzira.
Chii chinonzi artichoke chikafu?
Iyo inozivikanwa inozivikanwa yakaoma artichoke chikafu anenge mazuva matatu pakakwirira uye munguva ino pfupi inogona kurasika kusvika kumakirogiramu mana ekurema. Mushure menguva iyoyo ndipo zvachose kusanzwisisika enderera nerudzi urwu rwekudya kubvira iyo kushomeka kwezvakakosha zvinovaka muviri mairi inogona kukonzera zvakakomba uye zvakakomba matambudziko ehutano. Kudya uku kwakavakirwa pakudya artichokes panguva masikati uye kudya kwemanheru uye mukunwa mvura yakawanda yekuwana suka muviri wese yehupfu uye tsvina. Pakati pemazuva matatu anodyiwa nechikafu ichi, unogona zvakare kutora mamwe marudzi echikafu kunge zvigadzirwa zvemukaka zvishoma, michero, miriwo, turkey uye mupunga wakasviba.
Nokukurudzira high fiber kudya, unodzikira uremu mu mazuva mashoma kwazvo. Kunyangwe izvi, kana iwe wapedza iyo yekudya uye hauchinje maitiro ako panguva yekudya, zvinokwanisika kuti utambure iyo inotya rebound mhedzisiro yeaya anonzi echishamiso madhayeti uye kupora akawanda akawanda kilos yeavo vawakarasa neakakurumbira artichoke chikafu. Heino muenzaniso wezvaingave zviri menyu yezuva nezuva yemhando iyi yekudya.
Pakudya kwemangwanani unogona kuva nekapu yekofi nemukaka, tii kana muto wemichero pamwe chete chimedu chechingwa nechizi kana matatu makeke ezviyo akazara. Hafu mangwanani yogati yakasviba. Panguva yekudya artichokes nemupunga wakasviba uye chimedu chemuchero. Kwechikafu chinogadzirwa yogati kana kofi nemukaka. Kwekudya kwemanheru matatu akachekwa artichokes pamwe nechidimbu chechingwa chegorosi chakazara uye chikamu chidiki chesimisi chizi.
Chii chaunogona kudya mune ine hutano artichoke chikafu?
Chikafu cheatichokoke zviri nyore kwazvo kutevera se iri kunyanya yakavakirwa mukudya huwandu hwakawanda hweichi chikafu panguva Mazuva mazana matatu nemakumi matatu kuti kudya kunogara. Nenzira iyi unogona kutanga zuva uine hutano muto wemuriwo mune chinhu chikuru chirimo Artichoke. Panguva yekudya kwemasikati unogona kugadzira mbiya yemupunga wakasviba uye wedzera mumaartichokes mamwe chete. Sezvauri kuona, kiyi yerudzi urwu rwekudya inosanganisira kubatanidza artichoke kakawanda sezvinobvira mukudya kwako kwezuva nezuva.
Kana iwe uchida kugadzira chikafu chine artichoke iyo yekurasikirwa nayo kilos pasina kuisa hutano hwako panjodzi, iwe unofanirwa kusanganisa yakawanda yakawanda yezvikafu zvinovaka muviri senge michero yemhando yepamusoro, miriwo uye mapuroteni. Pamusoro peizvi, unogona kuisa pasita kana nyemba kutora mazuva mashoma pasvondo. Nenzira iyi iwe unogona kuwedzera kudya kweatichokoke mamwe mazuva mazhinji uye hauzoise hutano hwako panjodzi sezvo iri pamusoro kudya kunovaka muviri uye kwakaringana. Tevere ini ndichakuratidza muenzaniso wemenyu iyo iwe yaunogona kugadzira ne artichoke sechigadzirwa chikuru.
Panguva yemangwanani iwe unogona kutora muto wemuriwo yakagadzirwa nemaartichokes nemimwe miriwo uye mamwe makeke ezviyo akazara. Pakati-mangwanani iwe unogona kutora chimedu chemuchero wepanyama. Panguva yekudya kwemasikati unogona kugadzira akachekwa mazamu ehuku achiperekedzwa inokurudzira-fry ye artichokes. Kune iyo snack yakasvetuka yogati. Kwekudya chikafu chakasiyana saradhi pamwe ne artichoke omelette.
Zvirokwazvo, chikafu cheArtichoke mupfungwa yakasimba unofunga njodzi chaiyo nenjodzi kune hutano hwemuviri. Inotorwa sekudya kwe hypocaloric saka nekufamba kwemazuva, muchanzwa kudzikira uye pasina kana simba. Kushaya mapuroteni mazhinji akakosha nemafuta kune muviri hauna kudzikama zvachose. Pane zvinopesana uye sekuona kwawakaita mitsara mishoma pamusoro, zvinokwanisika kuita mhando ine hutano hweatichoke chikafu uye iyo yauchazokwanisawo kurasikirwa nhevedzano yemakirogiramu. Unongofanira kupa zvinonyanya kukosha zvinovaka pakudya kwakadai uye uteedzere imwe yakaenzana mhando yekudya.
Kuti ndipedze, ndinokuisa pazasi vhidhiyo inotsanangura kuitira kuti iwe unzwisise zvakadzama kuti chii chinoumbwa iyo inozivikanwa artichoke chikafu.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Kudya kweNutri » Utano » Kudya kweArtichoke
Chikafu chinokonzera kuzvimba kwemudumbu
Isiri-Yemwaka Kushungurudzika - Inovimbisa Mhedzisiro yeBlue White Mwenje Therapy